Passation du Responsable Bianco de la région Analamanga - TV Plus du 2 mars 2019 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil BIANCO Passation du Responsable Bianco de la région Analamanga – TV Plus du...
Passation du Responsable Bianco de la région Analamanga – TV Plus du 2 mars 2019
Nanamafy ny teo anivon’ny Bianco fa mbola hitohy ny fanadihadihana rehetra manoloana an’ireo tranga na tsy fanarahan-dalàna izay efa nisamborana olona teto amin’ny firenena tato ho ato. Azo lazaina fa manomboka ny ezaka eo amin’ny ady amin’ny kolikoly amin’izao fotoana izao saingy mbola tsy mahafa-po anefa ny vokatra azo hoy hatrany ny Bianco. Nahitana fihenana ihany koa ny tahan’iroe fitoriana na ny doléance tonga eny anivon’ny biraon’ny Bianco ary nihatsara ny votoatin’ny fitarainana tato ho ato.
Narindra Tiana, Rivo Randrianarijaona.
Taorian’ny fitoriana voaray sy ny fanadihadihana nataon’ny teo anivon’ny Bianco ka nampiakarana ny raharaha teny anivon’ny fitsarana miady amin’ny kolikoly no nahafahana nanao ny fisamborana maromaro izay mitranga tato ho ato. Ireo izay voaroiroy ho isan’ny nanao kolikoly no voasambotra tamin’izany. Nanamafy arak’izany ny Bianco fa mbola mitohy hatrany ny fanadihadihana ataon’izy ireo manoloana ity raharaha ity ary mety mbola maro ireo olona hohadihadihana ao anatin’izany. Tsy anjaran’ny Bianco intsony kosa anefa no manara-maso ny momba ireo raharaha ireo rehefa tafiakatra eny anivon’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly na ny Pac. Efa hita taratra fa mandroso ary misy fihatsarana ny ady amin’ny kolikoly eto amin’ny firenena raha ny hita saingy mbola tsy mahafam-po ny vokatra azo raha ny fanazavana.
Mandroso ny ady amin’ny kolikoly satria efa miha-maro ireo olom-pirenena no efa manda sy tsy manaiky an’izany fanaovana kolikoly izany. Raha ny vokatra indray dia hitako hoe mbola tsy dia tena mahafa-po satria iarahantsika mahalala raha nivoaka teo ny IPC farany teo an, dia mbola ambany dia ambany isika eto Madagasikara, iznay hoe mbola ambony be ny tahan’ny kolikoly eto. Raha hiteny sy hilaza fotsiny aho ohatra ny raharaha Ramatoa Razaimamonjy, ny resaka ohatra hoe ny resaka croix rouge, ny resaka ohatra hoe resaka bois de rose; betsaka ny raharaha mafana teto ary mbola betsaka ny ho avy eto satria amin’izao ezaky ny fanjakana izao mino aho fa tsy hisalasala ny olona hitaraina na hampita ny vaovao mahakasika an’ireto fandikan-dalàna goavana ireto.
Isan’ireo nahitana fihenana ihany koa ny sehatry ny fitoriana sy ny fitarainana voarain’ny Bianco na ny fitarainana amin’izao ary, hita fa nihatsara kosa ny votoatin’ireo fitoriana rehetra voaray. Notanterahina androany ny fampindram-pahefana teo amin’ny Talem-paritry ny Bianco teo Antananarivo teo aloha sy ny talem-paritra vaovao.
[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »ranarison-tsilavo-nexthope-obtient-428-492-euros-dans-un-jugement-du-tribunal-correctionnel-qui-se-contente-de-dire-quil-resulte-de-preuve-suffisante-donc-sans-aucune-motivation » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]
Article précédentConcept de Dina ou convention populaire de justice – Chronique d’une escalade sans fin – La gazette de la grande île du 2 mars 2019
Article suivantCondamnation de 2 ans de prison et 428.492 euros d’intérêts civils attribués à RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé, dans un jugement SANS MOTIVATION pour un supposé délit d’abus de biens sociaux rendu par le Tribunal correctionnel d’Antananarivo